Guddiga doorashada dadban oo dib u celiyay qaar ka mid ah liisaskii loo soo gudbiyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddiga doorashada dadban oo dib u celiyay qaar ka mid ah liisaskii loo soo gudbiyay
Guddiga doorashadda dadban ee heer federaal ayaa dib ugu celiyay liisaskii ay soo gudbiyeen maamul goboleedyada dalka, kuwaas oo ay ku qornaayeen musharixiinta Aqalka sare ee baarlamaanka.
War-saxaafadeed uu soo saaray guddiga doorashadda dadban ee dalka ayaa lagu sheegay liisaskii ay soo gudbiyeen maamul goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland inaysan ku caddeyn qoondadii haweenka loogu talo galay ee ahaa 30%.
Wuxuu guddiga doorashadda ku dooday in liisaska musharixiinta ee haweenka lagula tartansiiyay rag, taas oo ay ku sheegeen inay mugdi gelin karto kaalinta haweenka ay ku yeelan lahaayeen kuraasta Aqalka Sare ee baarlamaanka.
Guddiga doorashada ayaa dhinaca kale tilmaamay in maamulka kaliya ee haweenka u gaar yeelay inay ku loolamaan kuraasta uu yahay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyagoona sheegay inay ka aqbaleen liiska uu soo gudbiyay maamulkaasi.
Si kastaba ha ahaatee, dib u celinta liisaska musharixiinta ee Aqalka Sare ee seddaxda maamul ayaa la dhihi karaa waa mid keeni karta dib u dhac kale oo ku yimaada doorashada 2016-ka, iyadoona ay maanta ku beegneyd xilliga doorashada xildhibaanada Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Hadaba hoos ka aqriso war-saxaafadeedka ay soo saareen guddiga doorashada